Ku Kordhi iibintaada iyo wax soo saarkaaga 6dan jabsi | Martech Zone
Maalin kasta, waxaad moodaa inaan haysanno waqti yar oo aan ku daryeelno shaqadeena. Waa wax iska hor imanaya maaddaama ay jiraan barnaamijyo badan, haakooyin iyo aalado naga caawinaya inaan waqtiga ilaalino maalmahan. Waxay umuuqataa talooyinka iyo tabaha aadka noogu baahan inay naga badbaadiyaan waqtiga inay dhab ahaantii culeys weyn ku hayaan wax soo saarkeena.
Waa kuwan qaar ka mid ah hababka iyo aaladaha aan u adeegsado si aan u badbaadiyo naftayda iyo kooxdayda iibka wakhti badan oo aan u hagaajiyo wax soo saarkeenna guud.
Jabsiga 1: Waqtigaaga Diin ahaan ula soco
Waxaan in kabadan ka shaqeynayay in kabadan 10 sano hadaan runti aad u necbahay fikrada ah inaan la socdo waqtigaaga sida aad u shaqeyso. Weligay uma isticmaalin in aan hubiyo shaqaalahayga, laakiin taas waan helay runtii waxtar ayey yeelan kartaa codsiyada qaarkood.
Muddo bil ah, waxaan la socday waqtigayga hawl kasta oo aan qabtay. Hawlaha adag sida ka shaqeynta qorshaha suuqgeynta wax aad u fudud sida qoritaanka emaylka. Waxaan ku dhiirigaliyay shaqaalahayga inay sidan oo kale u sameeyaan muddo bil ah, diiwaanadooda shaqsiyadeed. Natiijooyinka waxay ahaayeen indho-fur.
Waxaan ogaanay inta waqtigeena ah in lagu lumiyey hawlo gebi ahaanba aan waxtar lahayn. Guud ahaan, waxaan inbadan kusoo qaadanay maalinteenii qorida emayl iyo shirar, anagoo qabanay shaqo aad uyar oo dhab ah. Markii aan bilownay raadinta waqtigeena, waxaan awoodnay inaan ogaano inta waqtigeena runti lumay. Waxaan ogaanay in kooxdayada iibinta ay waqti aad u badan kubixisay galida xogta CRM halkii aan kahadli lahayn rajada oo iibin lahayn soo jeedinta software. Waxaan ku dhammeynay gebi ahaanba dib-u-habeynta geeddi-socodka iibkeenna iyo socodsiinta maareynta mashruuca si ay u noqoto mid waxtar badan.
Soo-jeedinta Ka Wanaagsan waxay kuu suurta gelinaysaa inaad daqiiqado gudahood ku abuurto soo-jeedin qurux badan oo casri ah. Soo-jeedinta lagu sameeyay aaladani waa mid ku saleysan websaydh, la socon kara iyo beddelaad sare. Ogaanshaha marka soojeedinta la furo waxay kaa caawineysaa inaad dabagal ku sameyso waqtiga saxda ah, sidoo kale waxaad heli doontaa ogeysiis markii soo jeedinta la soo degsado, la saxiixo ama lacag laga bixiyo internetka. Automate iibkaaga, wacyi geli macaamiishaada kuna guuleyso ganacsi badan.
Saxeex u soo jeedinta wanaagsan ee bilaash ah
Jabsiga 2: Cun rah nool?
Marka hore, kugula talin maayo inaad dhab ahaan cuntid rahyo nool. Waxaa jira oraah caan ah oo uu qoray Mark Twain oo yiri waa inaad cun rah nool subixii waxa ugu horeeya. Habkaas, waxaad sameysay waxa ugu xun ee suuragalka ah ee maalin un dhici kara wax kastoo kale oo dhacaana way ka fiicnaan karaan oo keliya.
Rahaaga tooska ahi waa hawsha ugu xun ee suurtogalka ah ee ku dul fadhida dusha liiskaaga waxqabadka. Aniga ahaan, waxay maamushaa tikidhada taageerada macaamiisha. Subax kasta markaan furo laptop-ka, waxaan saacad ama labo saac u huraa aqrinta iyo ka jawaab celinta emaylka macaamiishooda. Maalinta inteeda kale waxay u egtahay neecaw. Kooxdayada iibka, waxaan kugula talinayaa inaad sameyso wax isku mid ah. Dadka kala duwan waxay leeyihiin fikrado kala duwan oo ku saabsan waxa ay rah nool waa, marka anigu ma soo jeedinaayo waxqabadka dhabta ah, laakiin waxaan kugula talinayaa inaad subaxa qabato waxyaabaha ugu xun, uguna adag.
Jabsiga 3: Ka Faa'iideyso Cadeynta Bulshada ee Websaydhkaaga
Helitaanka iibsi dheeraad ah iyada oo loo marayo suuq-geynta waxay u baahan tahay waqti iyo lacag. Intaa waxaa sii dheer, la imaanshaha habab cusub oo lagu helo macaamiisha waxay u baahan tahay cilmi baaris badan iyo shaqo adag. Laakiin waxaa jira waddo lagu helo iibsi dheeri ah adigoon lacag dheeraad ah ku bixin - iyadoo la adeegsanayo caddeyn bulsheed.
Xeeladdan suuq geynteedu waa mid si fiican loo baaray oo la caddeeyey inay ka shaqeyso dhowr warshado oo kala duwan. Si fudud haddii loo dhigo, waa inaad u isticmaashaa waayo-aragnimada macaamiishaada jira calaamaddaada si aad uga dhaadhiciso macaamiil badan inay lacag kula qaataan.
Noocyada caanka ah ee caddeynta bulshada waxaa ka mid ah dib u eegista, oggolaanshaha, marqaatiyada, ogeysiisyada beddelaadda iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo jira habab badan oo casri ah sida ogeysiisyada beddelaadda.
Hadaad horeyba uheshay macaamiil qanacsan, adeegsiga khibradahooda meesha saxda ah ee websaydhkaaga waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa sicirkaaga beddelka iyo lambarrada iibka. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax hal-cabbir ah-oo dhan xallinta waxayna qaadataa tijaabooyin qaar si loo helo qaaciddada caddeynta bulshada ee saxda ah. Warka fiicani waa, wuu shaqeeyaa oo runti si fiican buu u shaqeeyaa.
Jabsiga 4: Ka Qaado Onlineka
Kooxo badan oo iibka ah ayaa wali adeegsada qaab dhaqameed meesha ay rabaan inay kula kulmaan rajada shaqsiyeed si loo xiro heshiiska. In kasta oo tani ay leedahay faa iidooyin badan, haddana waxaa jira waxyeellooyin aad u badan. Markasta oo aad u baxdo kulan, waxaad lumineysaa waqti iyo lacag aad u fara badan, adigoon ogeyn inuu shirku isu beddelayo mid iib ah iyo in kale.
Waxaa jira qalab fara badan maalmahan kuwaas oo sahlaya in la xiro iibka meel fog. Barnaamijyada wada tashiga sida Zoom kuu ogolaanayaa inaad sameyso wicitaan fiidiyoow ah ka hor intaadan qabanqaabin kulan shaqsi ahaan. Qaabkaas, xitaa haddii aadan iibka helin, waxaad waayi doontaa oo keliya 15 daqiiqo oo waqtigaaga ah halkii aad maalin dhan ku booqan lahayd rajada.
Jabsiga 5: Isku Waafaji Iibkaaga Iyo Kooxaha Suuqgeynta
In badan oo ka mid ah shirkadihii aan u shaqeeyay, nidaamka iibku wuxuu ku xirmay hal sabab oo fudud. Waaxda iibku wax fikrad ah kama heysan waxa waaxda suuqgeyntu ku samaynaysay waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo agabkeeda suuqgeynta isla markaasna, waaxda suuqgeyntu wax fikrad ah kama haayso waxa maalin walba iibku la kulmo. Natiijo ahaan, macluumaad badan ayaa lumaya oo labada waaxoodba si hoose ayey u socdaan.
Si labada koox ay usii ahaadaan hal bog, waxaa muhiim ah in la yeesho shirar joogto ah halkaasoo kooxda iibinta iyo suuqgeynta ay hogaamineyso xubnahooduna ay wada fadhiisan karaan kana wada hadli karaan waxa ka dhacaya waax kasta. Suuqgeyntu waxay ubaahantahay inay ogaato waxa ku saabsan isdhexgalka macaamiisha iibka macaamiisha. Isla mar ahaantaana, iibintu waxay u baahan tahay inay wax ka ogaato waxyaabaha ugu dambeeyay ee macaamiisha soo foodsaaraya si ay ula jaanqaadaan dariiqadooda markay la xiriiraan rajooyinka cusub. Waxa kaliya ee ay qaadataa waa 15 daqiiqo asbuucii iyo labadaba wada xiriirka kooxda waxsoosaarkuna wuu horumari doonaa.
Jabsiga 6: Ku Adkee Adoo Kulamada Iibinta
Haddii qof ka mid ah kooxda iibku uu kulan la yeesho macaamiisha mustaqbalka, waxay ku leeyihiin wakhti walba adduunka. Si kastaba ha noqotee, shirarka gudaha, waqtigeena waa mid aad u kooban. Xusuusnow raadraaca waqtiga ee aan sameynay? Waxaan baranay inaan 4 saacadood usbuuc walba kubixineyno shirar aan haba yaraatee waxba usameynin yoolalka iibkeena.
Maalmahan, waxaan ku koobnay dhammaan kulamadeenna ugu badnaan 15 daqiiqo. Wax kasta oo intaas ka badan ayaa u qalma emayl waana calaamad muujinaysa in ajandaha kulanka aan si habboon loo dejin. Kuweena qadarinta shaqaalaha ayaa soo martay saqafka waxaanna badbaadinay tanno waqtiyo ah maalmahan - mahadsanid jabsigan fudud.
Qoraallada ugu dambeeya…
Kooxda iibinta weyn ayaa lagama maarmaan u ah shirkad dooneysa inay kordhiso dakhligooda iyo suurtagalnimada inay koraan. Kuwani waa qaar ka mid ah farsamooyinka muhiimka ah ee aan u adeegsanno si aan u hubino in kooxdayada iibku ay wax soo saar badan tahay intii suurtagal ah, waxaana rajeynayaa inaad u aragto inay waxtar leeyihiin. Waxaa laga yaabaa in meesha ugu muhiimsan ee laga qaato halkan ay tahay in wax jabsad kasta oo wax soo saar ahi uusan ku xirmin otomaatiga iyo tikniyoolajiyadda sare - waxaad ku guuleysan kartaa waxyaabo la yaab leh adigoo beddelaya qaar ka mid ah caadooyinkaaga iyo dhaqankaaga.
Tags: ogeysiisyada beddelkaqirashadaisku hagaajinta suuq geynta iyo iibintashirarka khadka tooska ahdemos internetkaiibka khadka tooska ahhindisahasoo jeedinta softwareReviewsiswaafajinta iibka iyo suuq geyntashirarka iibkawax soo saarka iibkasoo jeedinta iibkaSoo Jeedinta Iibkaraadinta iibkacaddayn bulshomarqaatiyaal
Adam Hempenstall waa Maamulaha iyo aasaasaha Soo Jeedinta Ka Wanaagsan, softiweerka soo-jeedinta fudud ee lagu abuurayo soo-jeedin qurxoon, saameyn-sare leh daqiiqado gudahood. Markuu ka caawiyay macaamiishiisa Better Proposals inay ku guuleystaan ​​$ 120,000,000 + hal sano oo kaliya, wuxuu bilaabay Jaamacadii ugu horeysay ee qorista soo jeedinta halkaasoo uu kula wadaago soo jeedinta ganacsiga hababka ugu fiican.
3da Warbixin ee CMO kasta oo B2B ah wuxuu ubaahanyahay inuu noolaado oo baraaraan sanadka 2020